မစိန်ခင်နှင့် ခွေးသိုး | Bluebook Myanmar
Admin | June 14, 2021 | BLUE BOOKS | 674 Comments
ခွေးသိုး၏လီးကြီးက မစိန်ခင်၏ ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်အကြားရှိ စောက်ဖုတ်အခေါင်းပေါက်ကျဉ်းကလေးထဲသို့ အဆက်မပြတ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာနေသည်။ မစိန်ခင်တစ်ယောက် ခါးကလေးကော့ကနဲ ကော့ကနဲဖြစ်သွားပြီး သူမဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို ပင့်မြှောက်၍ ခွေးသိုးလိုးဆောင့်မှုကို ဇိမ်ယူခံစားနေသည်။ ခွေးသိုးမှာ အရပ်ပုပုပြတ်ပြတ် လူလုံးလူဖန်သေးသော်လည်း သူ့လီးကြီးကမူ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မလိုက်ဖက်အောင်ပင် ကြီးမားဖွံ့ထွားကာ ရှည်လည်းရှည်လွန်းလှသည်။ သူ တစ်ချက်တစ်ချက် အားယူလိုးဆောင့်လိုက်တိုင်း မစိန်ခင်၏တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်မှာ အိကနဲ အိကနဲ တုန်ခါလှုပ်ယမ်းကာ ပိပြားသွားမတတ်ရှိပြီး လီးဒစ် ထိပ်ပြဲကြီးက သူမ၏သားအိမ်ကိုပင် ဒုတ်ကနဲဒုတ်ကနဲနေအောင် ထိတိုက်မိကာ မစိန်ခင်တစ်ယောက် အသက်ရှူပင်ရပ် ရပ်သွားခဲ့မိပါသည်။ လီးကြီးသလောက် ဆောင့်အားသန်ပြီး နင့်နင့်သီးသီးဖြစ်လှသလို တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် မခံစားဖူးသည့်အရသာကို ခံစားနေရကာ လူတစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းတိန်းဖိန်တိန်း ဖြစ်၍လာရသည်။ဗြိ ဖျစ် စွတ် … ဗြွတ် …ဗြစ် ပြွတ် ဗြွတ် … ဘုတ် စွပ် ဇွပ် ဘုတ် ဗွပ် အိ အိ အင်း အင့် ဟင့် …အင်း အင့် အ အ အင့် မစိန်ခင် အိမ်ကပြင်ထက်က ကျိုးတိုးကျဲတဲကြမ်းပြင်မှာပင် ဒူးထောက်ကာ ဖင်ကုန်း၍ အလိုးခံရင်း ပါးစပ်ကလည်း တဟင်းဟင်း နှင့် သက်ပြင်းတွေကို မကြာခဏချ၍ ဖင်ကြီးကိုကော့ကာ ကြွကာဖြင့် စိတ်လိုလက်ရပင် အလိုးခံရင်း အသက်ရှူသံပြင်းသထက်ပြင်းလာရပေသည်။
ခွေးသိုး သူ့လီးကို သူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲတွင် အရင်းထိမြုပ်နေအောင် ထည့်သွင်းပြီး သူ့ခါးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်၍ ဆောင့်လိုးမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်လိုက်ပါသည်။ မစိန်ခင် မျက်နှာကလေးရှုံ့မဲ့သွားသည်။ ထိချက်ပြင်းသလောက် ဇိမ်အတွေ့ကြီးတွေ့နေမိတာကြောင့်သူမဘယ်လိုမှ မငြင်းဆန်သာဘဲ ခွေးသိုးလိုးသမျှကို ကြိတ်မှိတ်၍ အောင့်ခံနေရ၏။ “အင့် ကျွတ် အ အလာ့လား အ ရှီး အအ ” “ဘုတ် ဇွပ် ဘုတ်စွိ ဇွပ် ဘွတ် ဘတ် ဖွပ် ဘုတ် ဖတ်ဘတ် ဗွပ် ” စောက်ရည်သံတွေ မြိုင်သွားသည်။ အသံထွက်လည်းမြန်လာသလို ခွေးလိုးသလို ဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်နှင့်သွက်သွက်ကြီးလိုးဆောင့်ချပုံမျိုးက ယောက်ျားတစ်ရာမှာ တစ်ယောက် တွေ့ရကြုံရခဲသည့်လိုးဆောင့်မှုပုံစံမျိုးပဲ ဖြစ်နေပေသည်။ ခွေးသိုးက လူကောင်သေးသလောက် သက်လုံက တော်တော်ကောင်းသူလို့ပြောရမည်။ အချက်ပေါင်းလေးငါးဆယ် ဆက်တိုက်လိုးနေတာတောင်မှ သူ့ဆောင့်အားကကျမသွားဘဲ ပိုမိုပြင်းထန်လာသလိုတောင် ထင်မှတ်ရပါသည်။ ခွေးသိုးဆောင့်ချက်က ပိုစိပ်လာပြီး မစိန်ခင်၏ စောက်ပတ်မှာလည်စောက်ရည်တွေ ပိုရွှဲလာရကာ လျှောကနဲလျှောကနဲနေအောင် လီးဝင်လီးထွက်ပိုကောင်းလာသည်။ မစိန်ခင် အကြိုက်တွေ့ပြီး စောက်ပတ်လည်း ပို၍ပင် ယားလာ ရွလာခဲ့ရသည်။ သူမ၏ကိုယ်အရှေ့ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် သည်အတိုင်း မှောက်အိပ်ချလိုက်ရာမှ သူမဖင်သားကြီးများကို နောက်ပစ်၍ ခွေးသိုးအသည်းအသန်ဆောင့်သွင်းမှုကို စောက်ပတ်ကြီး အပြဲသားနှင့်ကြိတ်မှိတ်ခံယူနေပေတော့သည်။
မစိန်ခင်၏ အိမ်ခန်းထဲမှာ လိုးသံ ဆောင့်သံတွေက သောသောညံသွားခဲ့ရပြီး… အိမ်ကလေးမှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက်၏ ကာမသောင်းကျန်းမှုဒဏ်ကြောင့် ကျွီကနဲ ကျွီကနဲ အသံများထွက်ကာ တသိမ့်သိမ့်လှုပ်ခါလျှက် ရှိချေပြီ။ ခွေးသိုး မီးပွင့်မတတ်ပင် လိုးပေးနေသည်။ဖင်ကြီးကို အနောက်ကနေပင့်မ၍ မစိန်ခင်၏ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးကို အလဲလဲအကွဲကွဲ နှုတ်ခမ်းသားများ ပြဲလန်ကုန်သည်အထိ နင်းကန်ဆောင့်လိုးပေးနေပေသည်။ ဘယ်အညှိုးနဲ့ဒီလောက်အထိ သဲကြီးမဲကြီးလိုးနေရသလဲလို့တောင် မေးရတော့မလောက်ပင်။ သူနေ့စဉ် မြင်တွေ့နေကျဖြစ်သော မစိန်ခင်၏ စောက်ပတ်ကြီးကို လိုးနိုင်ဖို့ရန် ခွေးသိုးအချိန်တွေအများကြီး ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရသည်ပဲ မဟုတ်လား။ မစိန်ခင်ကား လီးချစ်သူပီပီ ဖင်ကိုနောက်ပြန်ကုန်း၍ သူမ၏လင်ယောက်ျားလီးထက် ၃ဆ ၄ဆမက ပိုကြီးသည့်ခွေးသိုး၏လဒစ်ပြဲကြီးကို ဝက်ဝက်ကွဲပင် စောက်ဖုတ်ထဲ အပြည့်အသိပ် တစ်ကြပ်နေအောင် ထည့်သွင်းပြီး အလိုးခံနေရသည့်အဖြစ်ကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးဖြစ်နေပုံရပေသည်။ ခွေးသိုး တစ်ချက်ဆောင့်လိုးချလိုက်တိုင်း သူမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ ပြဲကနဲပြဲကနဲနေအောင် ပွင့်အာထွက်သွားပြီး သူ့လီးချောင်းထိပ်လုံးကြီး သားအိမ်ဆီ ပြေးပြေးဆောင့်မိသည့်အရသာကို တရှိုက်မက်မက် ခံစားလို့မဝလေဟန်ဖြင့် သူမ၏ဖင်ကို ကော့၍ကော့၍ နောက်ပြန်တွန်းဆောင့် ပေးနေတာကို ခွေးသိုး ကောင်းစွာ သတိထားမိပေသည်။ နှစ်ယောက်သား အပေးအယူမျှစွာပင် ကာမစည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝခံစား၍ …သူကဆောင့်ချလိုက် မစိန်ခင်က ပြန်ဆောင့်လိုက်နှင့်…စောက်ရည်သံတွေလည်း တဇွပ် ဇွပ် တဘွပ် ဘွပ် အချက်ကျကျ မြည်ဟီးထွက်ပေါ်ပြီး အသံမထွက်အောင် ဘယ်လိုမှပင် ထိန်းမရတော့ချေ။ ခွေးသိုး တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာအောင် မစိန်ခင်ကို ဖင်ကုန်းလိုးသည်။
ယခုလို ခွေးကုန်းပုံစံ လိုးဆောင့်မှုကို သူ့အနေနှင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သလို မစိန်ခင်လည်း နှစ်ထောင်းအားရ သဘောကျသည်ပင် … မစိန်ခင်တစ်ယောက် သူ့လီးအရသာကိုသိ၍ ဖင်ကုန်းလိုးလိုး ဘေးစောင်း ပက်လက်လိုးချင်သလို လိုး သူမစောက်ပတ်ထဲ လီးတဆုံးထည့်၍ အလိုးခံသည်ချည့်ဖြစ်သည်။ သူလိုးတိုင်းလည်း နှစ်ချီသုံးချီမက သူမ ” ပြီး ” ရပေသည်။ မစိန်ခင်က လင်ရှိမယားတစ်ယောက်မို့ လီးတော့အလွန်မက်သည်။စောက်ဖုတ်ထဲမှာ လီးတစ်ချောင်းမဟုတ် တစ်ချောင်း ထည့်အလိုးခံရမှ တင်းတိမ်ကျေနပ် နိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ ခွေသိုး သူ့လီးကို အဆက်မပြတ် တဇွပ်ဇွပ် တဗွပ် ဗွပ်ဆောင့်ရင်း လရည်တွေက မစိန်ခင်၏သားအိမ်ထဲသို့ ဗြစ်ကနဲဗြစ်ကနဲ ပန်းဝင်သွားသည်။ မစိန်ခင် ကိုယ်တိုင်မှာလည်း နှစ်ချီတိတိ ပြီး၍ စောက်ပတ်က ပွစိ ပွစိဖြစ်လာကာ ခွေသိုးလီးကို သူမစောက်ပတ်နှင့်ဖျစ်၍ ညှစ်၍ စောက်ရည်တွေ ဒလဟော ပန်းလွှတ်ထုတ်လိုက်လေ၏။ “ခွေးသိုး တော်ပြီဟာ နောက်နေ့မှလုပ်တော့ ခုနင် ပြန်လိုက်ဦး ” “လိုးလို့မှ မဝသေးတာ စိန်ခင်ရဲ့ ” “ငါ့သမီး နိုးလိမ့်မယ် မနက်ဖြန် နင် ကြိုက်တဲ့နေရာ ချိန်းလိုက် ငါလာမယ် ” “တကယ် နော် ဒါဖြင့် ငါ ပြန်တော့မယ် ” ခွေးသိုး သူ့ပုဆိုးကို ပြန်ကောက်စွပ်ပြီး “ရွှတ် ” ကနဲ မစိန်ခင် ပါးကလေးကို အသာနမ်း၍ နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး အိမ်ပေါ်ကနေ ပြန်ဆင်းသွားသည်။
မစိန်ခင် တံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်ကာ အိမ်ထဲကို လှမ်းဝင်လာခဲ့လိုက်ပါသည်။ သမီးဖြစ်သူက အိပ်မောကျကောင်းနေတုန်းပင် …။ မစိန်ခင်က ဈေးထဲမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းသည်။ ဈေးအသွားအပြန် အကြိုအပို့အလုပ်ကို ခွေးသိုး အောင်မြင့်နှင့်စိန်သန်း အစရှိသော ဆိုက္ကားသမားများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ကိုသာ အားကိုးအားထားပြု၍ နေ့တဓူဝ ဈေးထဲမှာပင် အချိန်ကုန်နေရသူဖြစ်သည်။ သူမမှာ လင်ရှိမယားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လင်ဖြစ်သူက မြဝတီ မဲဆောက်ဖက်သို့ ကုန်ကူးသွားမည်ဆိုပြီး ထွက်သွားရာက… ငွေလည်းမပို့ သတင်းလည်းပြန်မကြား အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော် သုံးနှစ်နီးပါးပင် ကြာမြင့်ခဲ့ပေပြီ။ သေပြီလား အသက်ရှင်လျှက်ရှိသေးရဲ့လားဆိုတာကိုတောင် သူမ မသိရတော့ချေ။ သမီးတစ်ယောက် ရှစ်တန်းအထိရောက်အောင် သူမကိုယ်တိုင်ပင် ရုန်းကန်လာခဲ့ရသည်။သမီးဖြစ်သူမှာလည်း ပညာရေးဖက်မှာ ဖြစ်ထွန်းမည့်ပုံမပေါ်ဘဲ မကြာခဏ စာမေးပွဲကျသူဖြစ်၍ ဒီတစ်နှစ် စာမေးပွဲထပ်ကျလျှင် ကျောင်းမှအထွက်ခိုင်းပြီး မိမိနှင့်အတူသာ အလုပ် လုပ်စေတော့မည် ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ မစိန်ခင်မှာ ရုပ်ရည်အတန်အသင့်ရှိပြီး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ဖြစ်သော ပုရိသအကြိုက် လုံးကြီးပေါက်လှ တင် ရင် အချိုးအစားကျကျ တစ်ရစ်ကားစွင့်သူဖြစ်လေရာ ယောက်ျားသားအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံရသူလည်း ဖြစ်သည်။နှုတ်ကမူ ကုန်စိမ်းသည်ပီပီ ကြမ်းသည်။
ဒါပေမယ့် သဘောမနောကောင်းသည်။ဆက်ဆံရေးလည်း ပြေပြစ်သူဖြစ်၍ ယောက်ျားသားတွေနှင့်ပါ ထွေးရောယှက်တင်ရှိနေတတ်ပြီး အားမနာစတမ်း ပြောရလျှင်မူ နည်းနည်းတော့အညှာလွယ်သည် ဟုဆိုရချေမည်။ ခွေးသိုးနှင့်မဖြစ်ခင် သူမတို့ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်နှင့်လည်း ယူကြတော့မလိုလို အဆင့်မျိုးအထိ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။ နောက် မည်သို့မည်ပုံ ဇာတ်လမ်းပြတ်သွားကြသည်မသိ။သူမ အချစ်ကံကြမ္မာက ခွေးသိုးလက်ထဲသို့ မထင်မှတ်ပါဘဲ ရောက်ရှိလာရတော့သည်။ နေ့လည်ခင်း ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့… သူမကို ခွေးသိုးလာခေါ်၍ ဆိုင်ရှိ ပစ္စည်းများသိမ်းပြီး သူ့ဆိုက္ကားနှင့်ပင် မြို့စွန်ဖက် လူနေရပ်ကွက် တစ်နေရာဆီသို့ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ခွေးသိုးက အိမ်တစ်အိမ်မှာသူမကို ထားခဲ့ပြီး စားသောက်စရာများ သွားရောက်ဝယ်ယူကာ မကြာမီ ပြန်ရောက်လာသည်။ “ကဲ ထမင်း အရင်စားမှာလား … လူကို အရင်စားဖို့လား ပြော” မစိန်ခင်က ခွေးသိုးကို ပြီတီတီ မခို့တယို့ကလေး ကြည့်ကာဖြင့် ပြောလိုက်သည်။ ခွေးသိုး တဟီးဟီးနှင့် သွားဖြီး၍ “လူကို အရင်လိုးမှာပေါ့ စိန်ခင်ရဲ့ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ” “ဟဲ့တိုးတိုး … သေနာကောင် လူတွေကြားကုန်လိမ့်မယ် ဟွင်း ” မစိန်ခင်က ခွေးသိုး ပေါင်တွင်းကြောကို ဆွဲလိမ်ပြီး ပြောလိုက်တော့ ” ကြားပလေ့စေ …ဟိုဖက်ခန်း ဒီဖက်ခန်း အလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေ ချည်းပဲ ဟီ ဟိ ” “သေနာ ငါ့ကို ဘယ်များ ခေါ်လာသလဲ မသိဘူး ဒီမှာဖြင့် အကောင်းမှတ်လို့” “ဟင်း ဟင်း ဟင်း စိန်ခင်ရယ် နေရာ ဒီလောက်အရေးမကြီးပါဘူး …နင်နဲ့ငါ အလုပ်ဖြစ်ဖို့သာ အဓိကပါ ” “ဒီလိုဆိုရင်လည်း ပြီး ရော ” မစိန်ခင်က ခပ်ငေါ့ငေါ့ပြောဆို၍ … ခွေသိုးက သူမ၏ထမီကို ခါးအထက် ပင့်လှန်တင်လိုက်ရာက ဖင်သားဖွေးဖွေးအိအိ ကြီးများကို လက်နှင့် ဆုပ်နယ်၍ သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲကို ခေါင်းတိုးဝင်လိုက်သည်။ “ဟင် တွေ့တာနဲ့ဒါပဲ ကွာ … ကျွတ် အ အ ရှီး အိ အင့် အင့် ” စိန်ခင် ခါးလေး ကော့တက်သွားရသည်။
သူမ ထမီလေးက ခါးအထက်ဆီလန်တက်နေပြီး သူမ၏အဆီတဝင်းဝင်းနှင့်ဖြစ်သော စောက်ဖုတ်ပြင်ကြီးက မဖုံးနိုင် မဖိနိုင်ဘဲဖြစ်ကာ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးနှစ်ဖက်အကြားမှာ ဘွားကနဲ ပေါ်ထွန်းနေလျှက် … ခွေးသိုး … သူမ၏စောက်ဖုတ်ပြင် ဖောင်းမို့မို့ကြီးကို ကုန်းနမ်းနေသည်။ နက်မှောင်ထူထဲသော့ စောက်မွေးများ ဝိုင်းရံနေသည့် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူအမ်းအမ်းကလေးတွေကို လျှာနှင့်သပ်ကာသပ်ကာဖြင့် ယက်ယက်ဆွပေးလိုက်သည်။ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အောက်မှနေအထက်သို့ လျှာနှင့်ထိုးကော်ကာ ယက်တင်ပစ်လိုက်ရင်း စောက်ခေါင်းလေးထဲ လျှာဖျားသွင်း၍ ထိုးမွှေ့ကလိကစားပေးသည်။အစိထိပ်ဖူးကလေးကို သွားဖြင့် မနာမကျင်အောင် တဇပ်ဇပ်နှင့် ကိုက်ခဲ စုပ်ဆွဲပေးသည်။ ” အ အ အိ အိ အင် … အ အ ” မစိန်ခင် စကားပင်မပြောနိုင်တော့။ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ကြွပေးလိုက်ရင်း ခွေးသိုး ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖိဖိချနေကာ သူ့ဆံပင်တွေကို ကုပ်ဖွ လိမ်ဆွဲ၍ …နှုတ်မှလည်း တရှီးရှီး တအိ အိ ညည်းတွားရင်းက ကော့ပျံထွန့်လူးသွားရလေ၏။ စောက်ရည်တွေက မြင်မကောင်းအောင်ပင် ရွှဲနစ်စွာ ဖိတ်လျှံ ထွက်ကျလာသည်။ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံးကို နူးအိနေအောင် လှည့်ပတ်မွှေနှောက်၍ အားရတော့မှ ခွေးသိုးခေါင်းပြန်ကြွလာပြီး သူမကိုယ်အထက်ပိုင်းမှ အင်္ကျီနှင့်ဘော်လီကိုချွတ်၍ နို့အုံ အိအိထွေးထွေးကြီး နှစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်ကာ နမ်းလိုက် စို့လိုက်လုပ်နေလေသည်။
နို့သီးခေါင်း ကလေးတွေကို လှိမ့်လှိမ့်ချေပေးသည်။ “ဟင်း ခွေးသိုး ဒီလောက်လုပ်တာ အားမရသေးဘူးလားဟင် ” “ငါ နင့်တစ်ကိုယ်လုံးကို နမ်းချင်တယ် အိမ်မှာလိုးလို့ အားမရဘူး ဒီမှာကျတော့ ဘယ်သူမှမသိဘူး တဝကြီးလိုးကြရအောင် ” “နင့်သဘောပဲ ငါ့ကိုလည်း နင့်လီး ပေးစုပ်ပါဦး ” “စုပ်လေ ပြောင်းပြန်အိပ်မယ် နင်လည်းစုပ် ငါလည်း စောက်ပတ်ယက်ပေး မယ် ” “အမယ်လေး ဒီတစ်ခါ ထပ်ယက်ရင်တော့ သေပါဘီတော် ဟင်း ဟင်း ” မည်သို့ဆိုစေ ခွေးသိုးအလိုကိုတော့ သူမလိုက်လျောပေးရှာသည်။အောက်ကနေ ပက်လက်လှန်ပြီး သူမပါးစပ်ဖြင့်လီးကို စုပ် လဒစ်ပတ်လည်ကို လျှာနှင့်ယက်ကာယက်ကာဖြင့် ဂွေးဥနှစ်လုံးပါမကျန် လိုက်လံ၍ စုပ်ဆွဲ ကစားပေးသည်။ ခွေးသိုးကလည်း အပေါ်ကနေ ဖင်ခေါင်းပြောင်းပြန်မှောက်အိပ်ရင်း သူမပေါင်ခြံကြားထဲ ဝင်၍ စောက်ပတ်ကို နမ်းစုပ်နေပြန်ပါသည်။ ခွေးသိုးလီးကမူ အပေါ်ကနေပြီး မစိန်ခင်ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို လိုးပေးနေသလိုကြီး ဖြစ်နေပေသည်။ ခွေးသိုးလီးက အပြတ်ကို တောင်လာသည်။ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ခေါင်းထောင်ကာ ဘယ်သူ့မှ ထီမထင်ဟန်ဖြင့် မတ်မတ် မတ်မတ် ဖြစ်၍ လာသည်။ သူမ၏တံတွေးများဖြင့် စိုလက်တောက်ပြောင်နေသော ခွေးသိုးလီးမှာ ကျောချမ်းစရာကောင်းလွန်းလှပြီး လိုးရန်အသင့်အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေချေပြီ။ “ကဲ လိုးတော့ ကိုယ်တော်ရေ …အချိန်ဆွဲမနေနဲ့တော့ ” မစိန်ခင်က ပြောလည်းပြော ပက်လက်အိပ်နေရာက သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ပြဲပြဲကားကားလုပ်၍ စောက်ဖုတ်ဖြဲဟပေးထားလိုက်သည်။
ခွေးသိုး သူ့လီးကို အပေါက်ဝမှာ အသေအချာချိန်၍ ဆောင့်သွင်းသည်။ လီးက စွတ် ဗြွတ် ကနဲ … စောက်ဖုတ်လိုဏ်ခေါင်းပေါက်ကလေးထဲ ကြပ်သိပ်စွာဖြင့် တိုးဝင်သွားတော့သည်။ “အ အား အိအိ … အား အား ဆောင့် ခွေးသိုး မရပ်နဲ့ ဆက်တိုက်ဆောင့်… ဆောင့်ပေး အ အိအိ အင့် ဆောင့်ပါမြန်မြန် ကာလနာ ကြီးရဲ့…အား ဟင်း ဟင့် အင့် အင့် ” “စွတ် ဖွပ် ဗြွတ် စွပ် ဖတ် ဗြွတ် … ဗ လွတ် ဖွတ် ဗွပ် ဘုတ် ဘတ် ဖွပ် … ဗွပ် ပြွတ် ဇွပ် ” “ကောင်းလိုက်တာ ခွေးသိုးရယ် ဟား …အိအ အား နင် …နင် ငါ့ကို လိုးပြီး …ပစ်မသွားနဲ့နော် ငါ နင့်နင့်လီးကို သိပ်ကြိုက်တယ် နင်လေ လူကောင်သေးသလောက် လီးကြီးက … ဟို ဆင်အံ…ငှက်ပျောသီး ကျ… ကျနေတာပဲ ဟင်း ဟင့် အ …အိ အင့် အင့် ” “စိန်ခင် နင်က ငါ့ထက် လီးကြီးတဲ့ကောင် မတွေ့ဖူးလို့ဖြစ်မယ် ငါ့ထက်လီးပိုကြီးတာတွေ့ရင် နင်သွားအလိုးခံမှာသေချာတယ် ” “အေး ဟုတ်တယ် ငါအလိုးခံမှာပဲ ငါက စောက်ပတ်ပြဲအောင်လိုးပေးနိုင်တဲ့လီးကို ပိုကြိုက်တယ် လူထက်တောင် လီးကိုပိုချစ်တယ် ကဲ ဘာပြောချင်သေးလဲ …မ သာကြီး ဖာ ဂေါင်း …ကြီး ရဲ့ ဟင်း ” မစိန်ခင် စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့်သူ့ကို ပြန်ပက်လိုက်တော့ ခွေးသိုး လိုးနေရာကနေ… တဟား ဟား အော်ရယ်လိုက်မိသည်။
သူ မစိန်ခင်ကို ချစ်စနိုး စ နောက်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်၍ သူမဘယ်လိုပြန်ပြောပြော စိတ်ဆိုးတတ်သူလည်း မဟုတ်ပါချေ။ “နင် မဆဲ နဲ့နော် ဟင်း ဟင်း ငါ ကနင့်ကို ချစ်လို့ …ဟင်း ဟင်း ဟင်း ” “ဘာ …ချစ် တာလဲ ဒါလား ချစ်တာ ဟွန့် သူများစောက်ပတ်ကိုကျတော့ မညှာစတမ်း လိုး …လိုး နေ ပြီးတော့ … ဟင့် ဟင့် ” “ချစ် ချစ်လို့ လိုးတာပေါ့ ဟာ နင်ကလဲ ” “ကာလနာ မြွေပွေးကိုက် …နင် လိုးချင် ရင် လိုးချင်တယ်လို့ပြော ဟွန်း … မအေ လိုး ကြီး ကဲ လိုးစရာရှိတာ မြန်မြန် သာလိုး ပါးစပ် ပိတ်ထား စမ်းပါ …” မစိန်ခင် ပြောရင်း သူ့ကို မြန်မြန်လိုးပေးဖို့ တစ်ဖက်လှည့်နှင့် လောဆော် လိုက်ပါသည်။ ခွေးသိုး အပြတ်ဆော်ပစ်လိုက်သည်။မီးပွင့်မတတ် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာနှင့်…တစ်ချီပြီးသည့်တိုင် မနားစတမ်းပင် သူမစောက်ပတ်ကို ဖိ၍ ဖိ၍ သဲကြီးမဲကြီး လိုးပစ်လိုက်လေသည်။ သူ့လီးထိပ်က လရည်တွေ သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲ တဗျစ်ဗျစ် ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ မစိန်ခင်တစ်ယောက် … အသည်းခိုက်မတတ် ပါပင်။ “အား အ အ အိ အိ အား ခွေး ခွေး သိုး ” ” ဟင်း ဟင်း ကောင်းလား စိန်ခင် ဘယ်လို လဲ ” “ကောင်းတယ် …ေခွးသိုး ငါ အားတောင် ပြတ်သွားသလိုပဲ … နင် တော်တော့်ကို အလိုးသန်တဲ့ကောင်ပဲ နင် ဒီလောက်လိုးနိုင်မယ်လို့ တောင် ငါ မထင်ဘူး ခွေးသိုး ရယ် ” ခုတော့လည်း မစိန်ခင် လေသံကလေးက နူးညံ့ပျော့ပျောင်း၍ နေပေသည်။
ခုနင်ကလို ဒေါမာန်ထကာ နေတဲ့ ” ကျားရိုင်းမကလေးတစ်ကောင်လို… ” မဟုတ်တော့ပေ … ။ တစ်ချီ ပြီးတော့ ခဏနား၍ စားကြသောက်ကြသည်။ စိန်ခင်က စီးကရက်တစ်လိပ်နှင့်မှိန်းကာနေသော ခွေးသိုး၏ရင်ခွင်မှာ ခေါင်းကလေးမှီနွဲ့၍ လဲလျောင်းကာ နေလိုက်ရင်း … “ငါ နင့်ကို ချစ်တယ် ခွေးသိုး နင်ငါ့ကို ပြန်မပို့နဲ့ဦး ဒီနေရာမှာပဲ တစ်နေ့လုံးနေကြရအောင် နော် ” “စိတ်ချ စိန်ခင်ရယ် ငါလည်းနင့်ကို တဝကြီးလိုးချင်နေတာ ကြာပါပြီ ” နှစ်ယောက်သား စကားတွတ်ထိုးပြောဆို၍ ခွေးသိုးက စိန်ခင့်ကိုယ်လုံးကလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ၍ တွန်းလဲှချလိုက်ပြန်လေသည်။ မစိန်ခင် အဲကွန်း ဘတ်စ်ကားကြီးထဲမှာ ကြပ်ကြပ်သိပ်သိပ်စီးနင်းလိုက်ပါလာသည်။ ခွေးသိုးနှင့်ချိန်းပြီး ပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာငွေစကလေးခပ်ရွှင်ရွှင်နှင့်မို့ မြို့ထဲဖက်သွား၍ အိမ်အတွက် လိုအပ်သည်များအား လိုက်လံဝယ်ခြမ်းပြီး ညနေ ၄နာရီထိုးလောက်မှ မြို့ထဲကနေ လိုင်းကားစီး၍ ပြန်လာသည်။ ဒီအချိန်ဆိုလျှင် သမီးဖြစ်သူ ကျောင်းမှပြန်ရောက်ပြီး၍ ညနေစာပင် ချက်ပြုတ် ပြီးစီးနေလောက်ပြီ။ မစိန်ခင် ခွေးသိုးကောင်းမှုကြောင့်ဒူူးတွေပါချောင်သွားရလောက်အောင် အားအင်ကုန်ခမ်း နွမ်းနယ်၍ နေသည်။သူမ အကြိမ်ကြိမ်အလီလီ ပြီးခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာတွေ ပြန်စဉ်းစားရင်း သူမရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာခဲ့ရသည်။ ကားက မှတ်တိုင်တစ်ခုပြီး တစ်ခု ရပ်လိုက် နားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက်နှင့်သူမအိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ တစ်နာရီကျော်လောက်တော့ အနည်းဆုံး စောင့်ရပေဦးမည်။ လူတွေကြားထဲ လဲပြိုကျမသွားအောင်ဆိုပြီး လက်ကိုင် ကွင်းကလေးကို အားပြုထိန်းကိုင်၍ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ပင် လိုက်ပါလာခဲ့ရသည်။
ယောက်ျား မိန်းမ ကိုယ်နံ့ချွေးနံ့ပေါင်းစုံနှင့် စကားပြောသံတွေ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ကိုယ်ချင်း ပူးပူးကပ်ကပ် ထပ်၍ ကြပ်ညှပ်နေအောင် ရှိရသည့်အထဲ ဘရိတ်တစ်ခါနင်းလိုက်တိုင်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရှေ့သို့ယိမ်းယိုင်ကာ အလဲလဲအပြိုပြို နှင့်တစ်ယောက်ကိုယ်ကို တစ်ယောက် တွန်းမိ တိုက်မိ ထိခိုက်မိ ရာကနေ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေလည်း မနည်းပေ။ မစိန်ခင်အနားကို ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက် တိုးဝင်လာပြီး သူ့ကိုယ်အရှေ့ပိုင်းနှင့်သူမဖင်သားတွေကို မထိတထိ လာရောက်ဖိကပ်၍ သွေးတိုးစမ်းသလို ပရောပရီလုပ်လာသည်။ မသိမသာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာတစ်ဖက်လှည့်ပြီး သူမဟုတ်သလိုပုံစံနှင့်… လူက အသားမည်းမည်း လူကောင်ခပ်ထွားထွား ဗိန္ဓောဆရာတစ်ယောက်လိုလို ဘာလိုလို …တမင်တကာပင် သူ့အကြောင်းသိအောင်ဆိုပြီး မစိန်ခင် တင်ပါးအိအိနှစ်ဖက်ကို သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ဇွတ်တိုးဝင်၍ ဖင်နောက်ပစ်ကာ ခြေဖျားအသာထောက်ကြွပေးလိုက်သည်။ သူ့ပုဆိုးအောက်မှ ဖုထစ်ရုန်းကြွကာ အရှေ့သို့ငေါထွက်မတတ် မတ်တောင်တင်းမာနေလျက်ရှိသော လိင်အင်္ဂါကြီးရဲ့ အထိအတွေ့က သူမအတွေးအထင်မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြလျှက်ရှိချေသည်။ မစိန်ခင် ကြိတ်ပြုံးလိုက်ရင်း သူမဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်ကို သူ့လီးကြီးအပေါ်ကနေ ဖိလှိမ့်ကြိတ်၍ မသိမသာ ညှောင့်ထိုးကစားပေးလိုက်တော့သူ တအားတက်သွားပုံရသည်။
သူမပုခုံးဆီ လက်တစ်ဖက်က လှမ်းကိုင်လာရင်း ကားဆောင့်လိုက်သည့်အရှိန်နှင့်ရောပြီး သူ့ခါးကိုအရှေ့သို့ကော့၍ ကော့၍ တွန်းရင်း လီးကြီးနှင့်သူမထမီ အပေါ်ကနေပဲ လိုးဆောင့်သလို ပြုနေပေသည်။ “ဟင်း… မကိုင်နဲ့… လူတွေ… နဲ့ ” သူ့ဖက် ခေါင်းအသာငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်ရာက မစိန်ခင် လေသံကလေးနှင့်ပြောရင်း သူမ၏ ပုခုံးပေါ်မှ သူ့လက်ကို အသာဆွဲဖယ်၍ သူမကိုယ်အောက်ပိုင်းရှိ ပေါင်နှစ်ဖက်အကြားထဲသို့ နေရာပြောင်းရွှေ့သွင်း ပေးလိုက်သည်။ သူ …ကိုင်ပြီ ။ စားနေကျ ကြောင်ဖားကြီးမှန်း သိသာလှသည်။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားနှိုက်နေသလို ကျန်တစ်ဖက်ကို သူမရင်နှစ်မြွှာအကြားထဲ အင်္ကျီအောက်မှနေ လက်လျှိုသွင်း၍ နို့အုံအိအိကို လာရောက် ဆုပ်နယ်နေကာ နို့သီးကလေးတစ်လုံးကို အသာဖျစ်ချေ၍ … အောက်မှာလည်း သူ့လီးက ဖင်သားအကြားကနေပြီး တိုးသထက်တိုးဝင်ကာ စောက်ပတ်ကိုလာထောက်နေပြီး ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာနှင့် လီးသွင်း၍ နှူးဆွပေးနေပေတော့သည်။ မစိန်ခင် လန့်မအော်မိအောင် စိတ်ကို အတော်ကလေး ထိန်းထားရသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် နင့်ကနဲ စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲ သူ့လီးဝင်သွားပလားလို့တောင် စိတ်မှာထင်မှတ်မိရပေသည်။
မစိန်ခင် အကောင်းကြီးကောင်း နေသည်။ ကားက လိုရာခရီးသို့မရောက်မချင်း သူကရှေ့တိုး၍ ဆောင့်လိုက် လူသူအရိပ်အခြည်ကြည့်၍ သူမကပြန်ညှောင့်လိုက်နှင့် အတော်ကလေး အလုပ်ဖြစ်ကာ ခရီးရောက်သွားသည်။ ” နာမည် ဘယ်လိုလဲ ” “ဘာလုပ်ဖို့လဲ ” “သိချင်လို့ ” ” …… …… ” ” ဘယ်မှာ နေတာလဲ ” ” …… …… ” မစိန်ခင် အဖြေမပေးလိုက်ပါ။ ခဏတာကြုံဆုံပြီး တဒင်္ဂသာယာမှုနောက်ကို လိုက်မိပေမယ့် အဆုံးစွန်တော့အရောက်မခံလိုချေ။ ရွှေမြို့တော်ပီပီ မကောင်းမှုဒုစရိုက် ကျူးလွန်လိုသူတွေက တင်းကြမ်း ပြည့်နှက်လို့နေတာ သူမ အသိပဲမဟုတ်လား။ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ “ဖယ် ကျွန်မ ဆင်းတော့မယ် ” ဆိုပြီး သူ့ကို နှုတ်ဆက်အကြည့်ဖြင့် ကြည့်၍ သူမကားပေါ်မှ အသာဆင်းပြီး အရည်တွေပေကျံနေသော သူမ၏ထမီကို ရှေ့နောက်လှည့်ပတ်၍ အသေအချာ ပြင်ဝတ်လိုက်ကာ အိမ်ကို ခပ်သွက်သွက်ပင် လျှောက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ကံကြုံလျှင်တော့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ရမည်မှာ အမှန်ပင်။ လောလောဆယ် သူနှင့်ကိုယ်ချင်းနှီးနှောမိရာမှ သူမအနေဖြင့် နှစ်ချီတိုင်တိုင် ကာမ လမ်းဆုံးသို့အပြီးတိုင် ရောက်ရှိခဲ့ရသည်ကိုတော့ သူမမှအပ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ပင် သိနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။ ဒီည ခွေးသိုးနှင့် အိမ်မှာ ချိန်းတွေ့ကြတော့ … မစိန်ခင် ထန်နေသည်။ စောက်ပတ်က အပြတ် ရွနေသည်။
ခွေးသိုးလည်း ဒီညမှပင် ထူူထူးခြားခြား ယခင်လိုးနေကျ အိမ်ကပြင်မှာသူမကိုမလိုးဘဲ အိမ်နောက်ဖေးဖက်ကို ခေါ်ထုတ်လာပြီး ရေချိုးသည့် နေရာနားရောက်တော့ မစိန်ခင်ကို ရေစည်နှုတ်ခမ်းကို ကိုင်၍ လက်ထောက်ကာ ဖင်ကို အကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး သူကအနောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်လျက်သား ထမီလှန်ကာ သူမစောက်ပတ်ထဲ လီးသွင်း၍ အဆက်မပြတ်ပင် ဆောင့်လိုးနေပေသည်။ နေ့လည် ဈေးကွဲချိန်လောက်က မစိန်ခင်မှာ သူသွားလာ လည်ပတ်နေကျ ဈေးခေါင်း မအုန်းရီအိမ်ကို သွားပြီး ထွေရာလေးပါး စကားအတင်းတွေ ပြောကြ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြနှင့်ခါတိုင်းလိုပင် အချိန်ဖြုန်းနေခဲ့သည်။ မအုန်းရီအိမ်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်းသာရှိပြီး ကလေးတွေလည်း ရှိမနေကြပေ။ သူ့ယောက်ျား ဘမောင်နှင့်ကလေးများပါ မော်လမြိုင်ကို တစ်ညအိပ်ခရီး သွားကြသည်ဆိုပြီး အိမ်မှာ လူမရှိတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မအုန်းရီနှင့်စိန်ခင်တို့နှစ်ယောက်သား အိမ်ခန်းထဲမှာ အခန်းတံခါးပိတ်၍ အပြာကား …အများအခေါ် အောကား …တစ်ကားပြီးတစ်ကား ထိုင်ကြည့်ကြသည်။ ကိုးရီးယား တရုတ် ဂျပန်အချစ်ကားရော အမေရိကန် အောကားတွေပါ စုံလို့…လီးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး လိုးနည်းပေါင်းလည်းစုံလင်စွာဖြင့်… ကြည့်ရင်းနှင့်ပင် ရင်ခုန်သံမြန်လာခဲ့ကြသည်။တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် အဓိပ္ပါယ်ပါပါနှင့် ကြည့်ရင်း လူချင်းတဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာခဲ့ကြသည်။ ပြီးတော့ …တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နမ်းကြ စုပ်ကြ…စောက်ဖုတ်ချင်းလည်း လင်ကွင်းရိုက်ကာ ပွတ်၍ ဆွ၍ … တစ်ယောက် အင်္ဂါဇပ်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်လျှာနှင့်ယက်ပေးလိုက်ကြသည်။
ယခင်ကလည်း အိမ်မှာလူမရှိချိန်တိုင်း သူမတို့နှစ်ဦးသား ကဲနေကျ သဲနေကျ ဖြစ်သည့်အတိုင်း တစ်နေ့ခင်းလုံး သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်အဆိုင်ပင် တဏှာထ၍ ညနေစောင်းလောက်မှ မစိန်ခင် အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ဗွီဒီယိုကားထဲက လိုးခန်းတွေမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် အမေရိကန် ကပ္ပလီကြီးများ၏လီး မဲမဲသဲသဲကြီးးတွေက မစိန်ခင်မျက်စိထဲကနေ တော်ရုံနှင့်ပြန်မထွက်ဘဲ ကပ္ပလီလီးကြီးတွေကို အလိုးခံလိုစိတ်နှင့် သူမစောက်ပတ်က တ ထထ…တ ရွရွနှင့်စောက်ရည်တရွှဲရွှဲဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ … ခွေးသိုးရောက်လာပြီး ပတ်ကြမ်းတိုက် တစ်ချီဆွဲတော့မှသာ မိမိ၏အာလျပြေရတော့သည်ဟူ၍ မစိန်ခင်တွေးလိုက်မိလေ၏။ ခွေးသိုးက သူမကိုလိုးနေရင်းကနေ ရင်သားများကိုကိုင်လိုက် နို့သီးတွေကို ချေလိုက် သူမလည်ကုပ်သား ကလေးတွေကို လျှာနှင့်လိုက်လံ ယက်စုပ်လိုက် လုပ်နေသည်။ အောက်ကနေလည်း လီးကြီးကို ညှောင့်၍ ညှောင့်၍ အဆက်မပြတ်ကြီး ဆောင့်လိုးပေးနေသည်။မစိန်ခင်စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး သူ့ဆောင့်လိုးမှုကြောင့်ပြဲပြဲလန်၍ပင် နေချေပြီ။အရည်လိုက် လိုက်ပုံမှာလည်း သူမပေါင်ခြံနှစ်ဖက်ဆီ စီးကျလာရသည်အထိပင် … “ဒီတစ်ချီ လိုးပြီးရင် နင့်ကို ငါ … ဖင် လိုးပေးမယ် ” ဆိုပြီး သူပြောလိုက်တော့ “ဖင်လိုးရင် နာမှာပေါ့ နင့်လီး ဒါလောက် ကြီးတာ ” မစိန်ခင် ပြန်ပြော၍ “မနာအောင် ငါ လုပ်ပေးမယ် ခုနင် ငါ့အပေါ်တက်လိုးလိုက် …ငါ နင့်ဖင်ပေါက်ချဲ့ပေးမလို့ ” ဆိုပြီး ခွေးသိုးက အောက်ကနေ သံမံတလင်းပေါ်မှာ ပက်လက်နေလိုက်ရင်း မစိန်ခင်ကို သူ့ကိုယ်ပေါ်တက်ခွထိုင်၍ တစ်လှည့်လိုးခိုင်းပြန်သည်။
မစိန်ခင်လည်း တချီပြီးလုပြီးခင် ဆတ်တငံ့ငံ့မဖြစ်လိုတော့၍ သူ့အလိုအတိုင်း လီးကြီးပေါ်ကို သူမစောက်ပတ်နှင့်တည့်တည့်တေ့ချိန်ကာ ထိုင်ဆောင့်လိုးချလိုက်ရင်း ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက် တလူးလူးတလှိမ့်လှိမ့်နှင့် ဖိလိုက် ကြွလိုက် နှိမ့်လိုက် မြှင့်လိုက်လုပ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဆောင့်၍ဆောင့်၍ လောကီ ကာမစည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝ ဖီလင်ယူ ခံစားနေလိုက်သည်။ ခွေးသိုးအောက်ကနေပြီး သူ့လက်ကိုအငြိမ်မနေဘဲ မစိန်ခင်၏ဖင်ပေါက်ကို လက်တံတွေးဆွတ်၍ ထိုးနှိုက်ကာဆောင့်ပေးနေသည်။မစိန်ခင်၏ဖင်စအိုဝလေးမှာ လီးတစ်ခါမှ မသွင်းဖူးသေး၍ တင်းတင်းစေ့ကာ ဖင်ဝစူတူတူကလေး ဖြစ်နေတာမို့သူ့အနေနှင့်တော်တော်ကလေး အားစိုက်၍ လက်ကို ထိုးသွင်း ထိုးထုတ် လုပ်ကာ လှည့်ပတ်မွှေနှောက် ဆောင့်ပေးနေရလေသည်။ “ကောင်းလား နင့်ဖင်ထဲ … လက်သွင်း လိုးပေးတာ… နှာပိုထ မလာဘူးလား ” သူကမေးတော့ “အင်း တစ်မျိုးပဲ လုပ် လုပ်ပေး …နင် တကယ် ဖင်လိုးဖို့လား ” “လိုးမယ် နင့်ကို စောက်ပတ်ရော ဖင်ရော …လိုးလိုက်ရမှ ငါကျေနပ် မယ် ” “သေချင်းဆိုး ငါ့ကို မသေသေ… အောင် လိုးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာပဲ နင့်မယားပါသားတွေ အကုန်ခေါ်ပြီး ငါ့ကို လာလိုးခိုင်းပါလား ” မစိန်ခင် ပက်ပက်စက်စက်ပင် ပြန်ပြောလိုက်သည်။ တကယ်တော့ ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းသည်ပင် သူမ၏ ထက်သန်ပြင်းပြလွန်းနေသည့် တဏှာရာဂစိတ်ကို ပွင့်အံထွက်လာအောင် ဖောက်ခွဲထုတ်သည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲ ဆိုတာ မစိန်ခင်နားလည်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သူမပါးစပ်ကသာ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုနေပေမယ့် လူကတော့ ခွေးသိုးလီးကို အပီအပြင်ကုန်းဆောင့်လို့ နေပေသည်။
လီးဝင်သံ ထွက်သံမှာ… ဗွပ် … ကနဲ ဇွတ်ဖွတ် …ဗွပ် ဗြိ ပြွတ် ဘုတ် ဖတ် … ဘတ် … ဘွတ် စွိ … စွပ် ဗြိ ပြွတ်… ဖွပ် … ဗွပ် ဘုတ် ဗွပ် … ဘွတ် ဖတ် … ဘတ် ဇွပ် … ကနဲ နေအောင် …ေ လအံသံ …စောက်ရည်သံ…တဇွပ်ဇွပ် နှင့်တကွ ဖင်ကြီးကြွ၍ ကြွ၍ ဆောင့်လိုးလေလေ အသံထွက် ပိုကြမ်းလာလေလေ ဖြစ်ကာ လီးကြီးမှာလည်း စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ကြမ်းကြမ်းကြီး ပွတ်တိုက်ဆောင့်ဝင်၍ ရမ္မက်တဏှာကို ဆထက်ထမ်းပိုး နှိုးဆွလှုံ့ဆော်ပေးနေသလိုကြီး ဖြစ်ပြီး … သူမမှာ အရှိန်မသတ်နိုင်တော့ဘဲ အသာစံဖို့ရန်အတွက် အနာခံရမည် ဟူသောခံယူချက်နှင့်အတူ တစ်ကိုယ်လုံးအင်အားအကုန်ထုတ်၍ ဖိ၍ ဖိ၍ သာ ဖင်ကို စကောဝိုင်းမွှေ့ယမ်း လိုးဆောင့်ချလိုက်ရင်းက မစိန်ခင် ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ ဓာတ်အလိုက်ခံလိုက်ရသလို ဆိမ့်ကျင်တက်သွားခဲ့ရပြီး … စောက်ရည်တွေကို သူမစောက်ခေါင်းကလေးထဲကနေ အပြင်ဖက်ဆီသို့ ဖြိုးဖြိုးဖျစ်ဖျစ် ပန်းထုတ်လိုက်မိလေတော့သည်။ လူကမူ အနားမယူသေးဘဲ ခွေးသိုးဟာကြီးကို အရင်းထိ မြုပ်နစ်ဝင်နေအောင် တစ်ဆောင့်တည်းဆောင့်၍ ခွေးသိုးလည်း လီးကိုကော့ထိုးလိုက် သူမဖင်ကို လက်သုံးချောင်းပူး၍ နှိုက်ဆောင့်လိုက်လုပ်ရင်းက မစိန်ခင်စောက်ခေါင်းပေါက် ကလေးအတွင်းသို့ သုက်ရည်တွေ တဖျောဖျော … ဖျစ်ကနဲ ဗြစ်ကနဲ ဖျစ်ညှစ်ပန်းလွှတ် လိုက်မိပြန်ပါ၏။ မစိန်ခင်လည်း နှုတ်မှနေ၍ ဟီး…ကနဲ ညည်းသံရှည်ကြီးပြုရင်း ခွေးသိုးလီးကို ဗြိ စွတ် ဗြွတ် ဆိုပြီး … တစ်ဆုံးမြုပ်သည်အထိ ဖိထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက် …မလှုပ်နိုင် မရှားနိုင်ဖြစ်ကာ …ငြိမ်ကျသွားပါလေသည်။
တစ်ချီ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချီပြန်စဖို့ အားယူနေကြပြန်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ မစိန်ခင်၏ဖင်ကို ခွေးသိုးက အပီအပြင် လိုးတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှာ … မစိန်ခင် အိမ်အတွင်းရှိ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်သူ ” ခင်ခင်အေး ” ၏ အိပ်ခန်းဆီမှ အသံတွေကိုတော့ မစိန်ခင်ရော ခွေးသိုးပါ မကြားနိုင်ကြပါချေ။ “ခင်ခင်အေး… ” သူမမှာ အမေတူသမီးဖြစ်၍ ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး ရင် ခပ်ထွားထွား တင်ပါးကားကားနှင့် ကိုယ်လုံး အဆက်အပေါက်လှပြီး ကြီးကောင်ဝင်စ အပျိုပေါက်မကလေးဖြစ်နေချေပြီ။ ရှစ်တန်းကျောင်းသူ ဆိုပေမယ့် မကြာခဏအတန်းကျ၍ အသက်က ၁၆ နှစ်ပြည့်လုနီးပြီ ဖြစ်ကာ ရည်းစားသနာပင် တစ်ယောက်မက ထားတတ်နေလေပြီ။ ကျောင်းမှာဆိုလည်း ကျောင်းအလျှောက် အိမ်မှာဆိုလည်း အိမ်အလျှောက် အမေမသိအောင် အချစ်ခန်း လှိုင်လှိုင်ကြီး ဖွင့်၍ အမေဖြစ်သူ မစိန်ခင်၏ခြေရာကို အမီလိုက်နင်းနိုင်သူကလေးပဲ ဖြစ်လေသည်။ ယခု သူမ၏အခန်းမှာ သူမနှင့်အတူရှိနေသူက … “စိန်သန်း… ” အမေ့အသိတွေထဲက တစ်ယာက်ဖြစ်သော ” စိန်သန်း… ” ဆိုသူပင်… စိန်သန်းက ခွေးသိုးရဲ့ လက်တွဲဖော် ဆိုးတူကောင်းဖက် ပွေဖော်ပွေဖက် သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်။ ခွေးသိုးက အမေကိုချုပ်ထားသလို စိန်သန်းကလည်း သမီးဖြစ်သူ ခင်ခင်အေးကို အပီကိုင်ထားသည်။စိန်သန်းတစ်ယောက် ခင်ခင်အေးကို ” ဖွင့် ” ခဲ့တာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ ဖွင့်တယ် … ဆိုတာက ပါကင်ဖွင့်တာ … လိုးတာကို ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ပါကင် ဖြစ်မဖြစ်တော့ သူ့အနေနှင့်သိပ်မသေချာပါ။ ခင်ခင်အေး မှာလည်း ကျောင်းမှာ …သူမနှင့်သက်တူရွယ်တူ ရည်းစား ဘာညာ သာရကာ ရှိသူပင်ဖြစ်၍ ထိုအထဲက တစ်ကောင်မဟုတ် တစ်ကောင်တော့ သူမ၏ အပျိုပါကင်အစစ်ကို ကံထူးမှာ သေချာပါပဲ……..။ပြီးပါပြီ
38 Comments | Apr 29, 2021
44 Comments | May 30, 2021
123 Comments | Apr 29, 2021
122 Comments | Jan 12, 2021
Дом Gucci смотреть онлайн	 August 20, 2021
cialis price	 August 27, 2021
web hosting that	 August 28, 2021
Sooplecek	 August 29, 2021
Errocox	 August 29, 2021
web page are truly awesome for people experience, well, keep up the good work
albully	 August 31, 2021
I payavisit each dayafew blogs and blogs to read articles, however this website offers
why asmr	 September 1, 2021
I am genuinely pleased to glance at this weblog posts which consists of plenty of useful data,
http://bitly.com/2WShZQd	 September 4, 2021
lilsVieby	 September 5, 2021
Darveda	 September 5, 2021
Pubboto	 September 5, 2021
seniskype	 September 6, 2021
my quest bars	 September 10, 2021
about my trouble. You’re amazing! Thanks! quest bars http://bitly.com/3C2tkMR quest bars
WereDiabe	 September 12, 2021
to begin. Any suggestions or hints? Many thanks! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights
soon. Cheers ps4 games https://bitly.com/3z5HwTp ps4 games
plaquenil dosage	 September 15, 2021
spously	 September 16, 2021
foernop	 September 16, 2021
elehogJuh	 September 18, 2021
Paulrix	 September 18, 2021
Annarix	 September 18, 2021
Jimrix	 September 19, 2021
Jackrix	 September 19, 2021
Lisarix	 September 19, 2021
Amyrix	 September 19, 2021
Nickrix	 September 19, 2021
Ivyrix	 September 20, 2021
Lisarix	 September 20, 2021
Miarix	 September 20, 2021
StetAnats	 September 20, 2021
Samrix	 September 20, 2021
Judyrix	 September 20, 2021
Markrix	 September 20, 2021
escoday	 September 20, 2021
Jackrix	 September 20, 2021
Amyrix	 September 21, 2021
Ivyrix	 September 21, 2021
Suerix	 September 21, 2021
Evarix	 September 22, 2021
Jackrix	 September 22, 2021
Joerix	 September 22, 2021
Paulrix	 September 22, 2021
Judyrix	 September 22, 2021
Janerix	 September 22, 2021
Amyrix	 September 22, 2021
Impongony	 September 22, 2021
get doctor to prescribe azithromycin	 September 23, 2021
Impulge	 September 23, 2021
Annarix	 September 23, 2021
Jimrix	 September 23, 2021
priligy review youtube	 September 23, 2021
Nickrix	 September 23, 2021
Suerix	 September 23, 2021
Kiarix	 September 23, 2021
Miarix	 September 23, 2021
Ivyrix	 September 24, 2021
Amyrix	 September 24, 2021
Lisarix	 September 24, 2021
Kiarix	 September 24, 2021
Evarix	 September 24, 2021
Jackrix	 September 25, 2021
Suerix	 September 25, 2021
Kimrix	 September 25, 2021
Maryrix	 September 25, 2021
Judyrix	 September 25, 2021
Lolvefe	 September 25, 2021
Nickrix	 September 26, 2021
Joerix	 September 26, 2021
Ivyrix	 September 26, 2021
Paulrix	 September 26, 2021
Annarix	 September 26, 2021
Maryrix	 September 26, 2021
Judyrix	 September 26, 2021
Miarix	 September 27, 2021
Joerix	 September 27, 2021
Nickrix	 September 27, 2021
Ivyrix	 September 27, 2021
Carlrix	 September 27, 2021
Samrix	 September 27, 2021
Miarix	 September 28, 2021
Janerix	 September 28, 2021
Evarix	 September 28, 2021
Ivyrix	 September 28, 2021
Ashrix	 September 28, 2021
Markrix	 September 28, 2021
Nickrix	 September 28, 2021
Carlrix	 September 28, 2021
Amyrix	 September 28, 2021
Yonrix	 September 28, 2021
Kimrix	 September 29, 2021
Kiarix	 September 29, 2021
Judyrix	 September 29, 2021
Paulrix	 September 29, 2021
Tedrix	 September 29, 2021
Lisarix	 September 29, 2021
Jackrix	 September 29, 2021
Joerix	 September 29, 2021
Evarix	 September 29, 2021
Ugorix	 September 30, 2021
Amyrix	 September 30, 2021
Judyrix	 September 30, 2021
Wimrix	 September 30, 2021
Carlrix	 September 30, 2021
Ashrix	 October 1, 2021
Suerix	 October 1, 2021
Samrix	 October 1, 2021
Ugorix	 October 1, 2021
Wimrix	 October 1, 2021
Tedrix	 October 1, 2021
instagram takipçi satın a	 October 1, 2021
daily basis. It’s always exciting to read through articles from other writers and practicealittle something from their websites.
Uttetsker	 October 2, 2021
Maryrix	 October 2, 2021
Kimrix	 October 2, 2021
playene	 October 2, 2021
Zakrix	 October 2, 2021
Jimrix	 October 2, 2021
Boorix	 October 2, 2021
Kiarix	 October 2, 2021
Markrix	 October 2, 2021
Yonrix	 October 2, 2021
Joerix	 October 3, 2021
Ivyrix	 October 4, 2021
Lisarix	 October 4, 2021
Judyrix	 October 4, 2021
Teorix	 October 4, 2021
Miarix	 October 4, 2021
Ashrix	 October 4, 2021
Markrix	 October 5, 2021
Boorix	 October 5, 2021
Ashrix	 October 5, 2021
Yonrix	 October 5, 2021
Kiarix	 October 5, 2021
Annarix	 October 6, 2021
Zakrix	 October 6, 2021
Markrix	 October 6, 2021
Joerix	 October 6, 2021
Carlrix	 October 6, 2021
Wimrix	 October 6, 2021
Yonrix	 October 6, 2021
Amyrix	 October 6, 2021
Ugorix	 October 7, 2021
Samrix	 October 7, 2021
Miarix	 October 7, 2021
Suerix	 October 7, 2021
Boorix	 October 8, 2021
Teorix	 October 8, 2021
Ashrix	 October 8, 2021
Jimrix	 October 8, 2021
Paulrix	 October 8, 2021
Janerix	 October 8, 2021
Kiarix	 October 8, 2021
Judyrix	 October 8, 2021
butPoolla	 October 8, 2021
Ugorix	 October 8, 2021
Amyrix	 October 8, 2021
Nickrix	 October 8, 2021
Maryrix	 October 8, 2021
tremylype	 October 8, 2021
Jackrix	 October 9, 2021
Kiarix	 October 9, 2021
Zakrix	 October 9, 2021
Lisarix	 October 9, 2021
Annarix	 October 9, 2021
Yonrix	 October 9, 2021
Evarix	 October 9, 2021
Ivyrix	 October 10, 2021
Joerix	 October 10, 2021
Nickrix	 October 10, 2021
Annarix	 October 10, 2021
Amyrix	 October 10, 2021
Markrix	 October 10, 2021
Zakrix	 October 10, 2021
Maryrix	 October 10, 2021
Nickrix	 October 11, 2021
Lisarix	 October 11, 2021
Tedrix	 October 11, 2021
Ashrix	 October 11, 2021
Carlrix	 October 11, 2021
Ugorix	 October 11, 2021
Miarix	 October 11, 2021
Annarix	 October 12, 2021
Paulrix	 October 12, 2021
Wimrix	 October 12, 2021
Samrix	 October 12, 2021
[url=http://viagraeddrug.com/]buy online viagra tablets[/url]
Boorix	 October 12, 2021
Ashrix	 October 12, 2021
Miarix	 October 12, 2021
Jimrix	 October 12, 2021
Kiarix	 October 12, 2021
Tedrix	 October 12, 2021
Yonrix	 October 13, 2021
Judyrix	 October 13, 2021
Samrix	 October 13, 2021
Boorix	 October 13, 2021
Kimrix	 October 13, 2021
Zakrix	 October 13, 2021
Evarix	 October 14, 2021
Carlrix	 October 14, 2021
Annarix	 October 14, 2021
Markrix	 October 14, 2021
Teorix	 October 14, 2021
Ugorix	 October 14, 2021
Jackrix	 October 14, 2021
Yonrix	 October 14, 2021
Maryrix	 October 15, 2021
Markrix	 October 15, 2021
Ashrix	 October 15, 2021
Janerix	 October 15, 2021
Tedrix	 October 15, 2021
Wimrix	 October 15, 2021
Ivyrix	 October 16, 2021
Joerix	 October 16, 2021
Yonrix	 October 16, 2021
Zakrix	 October 16, 2021
Jimrix	 October 16, 2021
Nickrix	 October 16, 2021
Samrix	 October 16, 2021
Joerix	 October 17, 2021
Annarix	 October 17, 2021
Suerix	 October 17, 2021
Carlrix	 October 17, 2021
Boorix	 October 17, 2021
Maryrix	 October 17, 2021
Jackrix	 October 17, 2021
Nickrix	 October 17, 2021
Carlos Wickizer	 October 18, 2021
Lisarix	 October 18, 2021
Miarix	 October 18, 2021
Kimrix	 October 18, 2021
Ivyrix	 October 18, 2021
Boris Trible	 October 18, 2021
Markrix	 October 18, 2021
Sammie Reckleben	 October 18, 2021
Judyrix	 November 1, 2021
Evarix	 November 1, 2021
Wimrix	 November 2, 2021
Ivyrix	 November 15, 2021
Miarix	 November 15, 2021
Jackrix	 November 15, 2021
Maryrix	 November 15, 2021
Nickrix	 November 15, 2021
Suerix	 November 15, 2021
Samrix	 November 15, 2021
Jimrix	 November 15, 2021
Wimrix	 November 16, 2021
Jimrix	 November 16, 2021
Annarix	 November 16, 2021
Miarix	 November 16, 2021
Joerix	 November 16, 2021
Tedrix	 November 16, 2021
Suerix	 November 16, 2021
Kimrix	 November 16, 2021
Markrix	 November 16, 2021
Ivyrix	 November 16, 2021
Carlrix	 November 16, 2021
Yonrix	 November 16, 2021
Ugorix	 November 16, 2021
Nickrix	 November 16, 2021
Evarix	 November 17, 2021
Suerix	 November 17, 2021
Samrix	 November 17, 2021
Miarix	 November 17, 2021
Jackrix	 November 17, 2021
Teorix	 November 17, 2021
Ashrix	 November 17, 2021
Ugorix	 November 17, 2021
Nickrix	 November 17, 2021
Yonrix	 November 17, 2021
Paulrix	 November 17, 2021
Annarix	 November 17, 2021
Joerix	 November 17, 2021
Janerix	 November 17, 2021
Carlrix	 November 17, 2021
Tedrix	 November 17, 2021
Kimrix	 November 17, 2021
Paulrix	 November 18, 2021
Jimrix	 November 18, 2021
Ivyrix	 November 18, 2021
Annarix	 November 18, 2021
Nickrix	 November 18, 2021
Miarix	 November 18, 2021
Janerix	 November 18, 2021
Darleen Newitt	 November 18, 2021
I’ve been exploring foralittle bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to exhibit that I haveavery just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I most no doubt will make certain to do not put out of your mind this site and give italook regularly.|
Wimrix	 November 18, 2021
Evarix	 November 18, 2021
Joerix	 November 18, 2021
Ashrix	 November 18, 2021
Amyrix	 November 18, 2021
Suerix	 November 18, 2021
Annamaria Mcmurtry	 November 18, 2021
Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.|
Zakrix	 November 18, 2021
Samrix	 November 18, 2021
Nickrix	 November 19, 2021
Jackrix	 November 19, 2021
Annarix	 November 19, 2021
Boorix	 November 19, 2021
Miarix	 November 19, 2021
Kiarix	 November 19, 2021
Joerix	 November 19, 2021
Jimrix	 November 19, 2021
Ashrix	 November 19, 2021
Kimrix	 November 19, 2021
Evarix	 November 19, 2021
Yonrix	 November 19, 2021
Suerix	 November 19, 2021
Samrix	 November 20, 2021
Nickrix	 November 20, 2021
Carlrix	 November 20, 2021
Lisarix	 November 20, 2021
Ugorix	 November 20, 2021
Judyrix	 November 20, 2021
Annarix	 November 20, 2021
Evarix	 November 20, 2021
Jackrix	 November 20, 2021
Zakrix	 November 20, 2021
Janerix	 November 20, 2021
Kimrix	 November 20, 2021
Ivyrix	 November 20, 2021
Miarix	 November 20, 2021
Maryrix	 November 20, 2021
Doug Curia	 November 20, 2021
Amyrix	 November 20, 2021
Suerix	 November 20, 2021
Ivyrix	 November 21, 2021
Boorix	 November 21, 2021
Paulrix	 November 21, 2021
Jackrix	 November 21, 2021
Miarix	 November 21, 2021
Jimrix	 November 21, 2021
Samrix	 November 21, 2021
Kiarix	 November 21, 2021
Evarix	 November 21, 2021
Lisarix	 November 21, 2021
Yonrix	 November 21, 2021
Kimrix	 November 21, 2021
Annarix	 November 21, 2021
Nickrix	 November 21, 2021
Ugorix	 November 21, 2021
Jimrix	 November 22, 2021
Suerix	 November 22, 2021
Joerix	 November 22, 2021
Wimrix	 November 22, 2021
Tedrix	 November 22, 2021
Judyrix	 November 22, 2021
Nickrix	 November 22, 2021
Miarix	 November 22, 2021
Ivyrix	 November 22, 2021
Samrix	 November 22, 2021
Boorix	 November 22, 2021
Jorge Hutchinson	 November 22, 2021
Janerix	 November 22, 2021
Annarix	 November 22, 2021
Janerix	 November 23, 2021
Amyrix	 November 23, 2021
Evarix	 November 23, 2021
Ashrix	 November 23, 2021
Nickrix	 November 23, 2021
Samrix	 November 23, 2021
Ugorix	 November 23, 2021
Jackrix	 November 23, 2021
Jimrix	 November 23, 2021
Joerix	 November 23, 2021
Kiarix	 November 23, 2021
Carlrix	 November 23, 2021
Suerix	 November 23, 2021
Markrix	 November 23, 2021
Annarix	 November 23, 2021
Paulrix	 November 24, 2021
Wimrix	 November 24, 2021
Samrix	 November 24, 2021
Judyrix	 November 24, 2021
Miarix	 November 24, 2021
Yonrix	 November 24, 2021
Charity Ruiz	 November 24, 2021
cialis 100mg dosage tadalafil uk generic cialis results
Evarix	 November 24, 2021
Suerix	 November 24, 2021
asmr when	 November 24, 2021
Zakrix	 November 24, 2021
Joerix	 November 24, 2021
Nickrix	 November 24, 2021
Ivyrix	 November 24, 2021
Brian Nunez	 November 24, 2021
Markrix	 November 24, 2021
Boorix	 November 24, 2021
Tedrix	 November 24, 2021
Amelia Messier	 November 24, 2021
buy cialis online generic tadalafil cialis soft gel
Evarix	 November 25, 2021
Jackrix	 November 25, 2021
Maryrix	 November 25, 2021
Annarix	 November 25, 2021
Teorix	 November 25, 2021
Nickrix	 November 25, 2021
Linda Greer	 November 25, 2021
Ugorix	 November 25, 2021
Ivyrix	 November 25, 2021
Zakrix	 November 25, 2021
Joerix	 November 25, 2021
Samrix	 November 25, 2021
Miarix	 November 25, 2021
Janerix	 November 25, 2021
Chester Gehrmann	 November 25, 2021
cheap viagra sildenafil online prescription buy sildenafil citrate
Yonrix	 November 25, 2021
Kiarix	 November 25, 2021
Suerix	 November 25, 2021
Jimrix	 November 25, 2021
Kimrix	 November 25, 2021
Judyrix	 November 25, 2021
Wimrix	 November 25, 2021
Janerix	 November 26, 2021
Boorix	 November 26, 2021
Jackrix	 November 26, 2021
Suerix	 November 26, 2021
Amyrix	 November 26, 2021
Joerix	 November 26, 2021
Evarix	 November 26, 2021
Nickrix	 November 26, 2021
Kimrix	 November 26, 2021
Young Gusler	 November 26, 2021
Quality posts is the main to attract the viewers to go to see the website, that’s what this website is providing.|
Ashrix	 November 26, 2021
Miarix	 November 26, 2021
Carlrix	 November 26, 2021
Annarix	 November 26, 2021
Wimrix	 November 26, 2021
Ivyrix	 November 26, 2021
Nickrix	 November 27, 2021
Suerix	 November 27, 2021
Miarix	 November 27, 2021
Ugorix	 November 27, 2021
Joerix	 November 27, 2021
Teorix	 November 27, 2021
Jackrix	 November 27, 2021
Jimrix	 November 27, 2021
Judyrix	 November 27, 2021
Ivory Diponio	 November 27, 2021
Just wish to say your article is as astounding. The clearness to your post is just cool and i can think you are an expert on this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay updated with approaching post. Thanks one million and please continue the rewarding work.|
Ashrix	 November 27, 2021
Janerix	 November 27, 2021
Lisarix	 November 27, 2021
Evarix	 November 27, 2021
Annarix	 November 27, 2021
Marilu Mellin	 November 27, 2021
Wimrix	 November 27, 2021
Ivyrix	 November 27, 2021
Zakrix	 November 27, 2021
Janerix	 November 28, 2021
Teorix	 November 28, 2021
Boorix	 November 28, 2021
Samrix	 November 28, 2021
Joerix	 November 28, 2021
Maryrix	 November 28, 2021
Miarix	 November 28, 2021
Amyrix	 November 28, 2021
Ashrix	 November 28, 2021
Carlrix	 November 28, 2021
Kiarix	 November 28, 2021
Jackrix	 November 28, 2021
Ivyrix	 November 28, 2021
Jimrix	 November 28, 2021
Suerix	 November 28, 2021
Nickrix	 November 28, 2021
Tedrix	 November 28, 2021
Judyrix	 November 29, 2021
Kimrix	 November 29, 2021
Nickrix	 November 29, 2021
Joerix	 November 29, 2021
Jackrix	 November 29, 2021
Evarix	 November 29, 2021
Annarix	 November 29, 2021
Ivyrix	 November 29, 2021
Miarix	 November 29, 2021
Samrix	 November 29, 2021
Jimrix	 November 29, 2021
Wimrix	 November 29, 2021
Teorix	 November 29, 2021
Ugorix	 November 29, 2021
Paulrix	 November 29, 2021
Amyrix	 November 29, 2021
Suerix	 November 29, 2021
Markrix	 November 30, 2021
Evarix	 November 30, 2021
Yonrix	 November 30, 2021
Kimrix	 November 30, 2021
Nickrix	 November 30, 2021
Suerix	 November 30, 2021
Boorix	 November 30, 2021
Annarix	 November 30, 2021
Jimrix	 November 30, 2021
Ivyrix	 November 30, 2021
Joerix	 November 30, 2021
Jackrix	 November 30, 2021
Lisarix	 December 1, 2021
Ashrix	 December 1, 2021
Nickrix	 December 1, 2021
Samrix	 December 1, 2021
Amyrix	 December 1, 2021
Jackrix	 December 1, 2021
Evarix	 December 1, 2021
Janerix	 December 1, 2021
Joerix	 December 1, 2021
Kimrix	 December 1, 2021
Yonrix	 December 2, 2021
Ugorix	 December 2, 2021
Jackrix	 December 2, 2021
Suerix	 December 2, 2021
Joerix	 December 2, 2021
Jimrix	 December 2, 2021
Nickrix	 December 2, 2021
Kimrix	 December 2, 2021
Evarix	 December 2, 2021
Samrix	 December 2, 2021
Ivyrix	 December 2, 2021
Suerix	 December 3, 2021
Miarix	 December 3, 2021
Janerix	 December 3, 2021
Tedrix	 December 3, 2021
Jimrix	 December 3, 2021
Nickrix	 December 3, 2021
Jackrix	 December 3, 2021
Janerix	 December 4, 2021
Lisarix	 December 4, 2021
Kimrix	 December 4, 2021
Suerix	 December 4, 2021
Miarix	 December 4, 2021
Evarix	 December 4, 2021
Annarix	 December 4, 2021
Ivyrix	 December 4, 2021
Ugorix	 December 4, 2021
Boorix	 December 4, 2021
vodoGonge	 December 4, 2021
© 2021 Bluebook Myanmar.
error: Share လုပ်သွားပါ Copy မယူပါနဲ့နော် ချစ်တယ်အာဘွား😘 !!